Fifa Oo Sheegtay In Laqafiifin Doono Ganaaxa Luis Suarez | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Fifa Oo Sheegtay In Laqafiifin Doono Ganaaxa Luis Suarez
Madaxweyne ku xigeenka FIFA ahna xubin sarre oo ka tiran kubada cagta Uruguay Eugenio Figueredo ayaa si maldahan u sheegay in laga yaabo in dib loo furo kiiska weeraryahanka Barcelona Luis Suarez ee la xiriirta ganaaxiisa uu ku muteystay qaniinyadii uu sameeyay Koobka Adduunka.
“Marka waqti yar uu ina dhaafo, waxaan eegi doonaa sida siyaasad ahaan ciqaabtaan loo jilcin lahaa wax yar” ayuu Figueredo u sheegay Tv-ga dalka Uruguay ee Canal 12.
Mas’uulkaan ayaa sheegay in madaama racfaankii hore aan lagu dhimin mudada ganaaxa in haatan laga yaabo in dib loo fiiriyo.
Markii hore Suarez waxaa laga ganaaxay dhaqdhaqaaqa kubada cagta oo dhan muddo afar bilood ah iyo sagaal kulan oo uu ku seegayo kulamada heerka caalami. Ka dib markii Barcelona ay maxkamada sarre ee isboortiga racfaan ka qaadatay, weeraryahanka waxaa loo ogolaaday inuu tababar la sameyn karo kooxdiisa islamarkaana uu u ciyaari karo kulamada aan tartanka rasmiga ah aheyn, isagoo dhawaan kulamado saaxiibtinimo u ciyaaray Barca B.
Iyadoo Suarez uu seegay kulamadii ay Uruguay la ciyaartay Japan iyo Korea bishii September, waxaa lagu soo daray xulka Uruguay ee wajahaya Suadi Arabia iyo Oman 10ka iyo 13ka October. Si kastaba ilaa iyo in ganaaxiisa la dhimo mooyee, Suarez awood uma yeelan doono inuu wadankiisa u ciyaaro kulan tartan rasmi ah waxaana uu ka fariisan doonaa Copa America.